"Modric Wuxuu U Qalmaa Ballon d'Or Kale, Marcelo Waa....." - Madaxweyne Perez Oo Amaan Ugu Qubeeyay Saddex Xiddig Oo Real Madrid Ah - GOOL24.NET
“Modric Wuxuu U Qalmaa Ballon d’Or Kale, Marcelo Waa…..” – Madaxweyne Perez Oo Amaan Ugu Qubeeyay Saddex Xiddig Oo Real Madrid Ah
Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa amaanay qaar kamida xiddigaha kooxdaasi kaddib markii ay xalay ku guuleysteen koobka Spanish Super Cup.
Los Blancos ayaa qaaday koobkii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan dalka Spain iyaga oo 2-0 kaga adkaaday Athletic Bilbao kaddib goolal ay ka heleen Luka Modric iyo Karim Benzema ciyaar ka dhacday dalka Saudi Arabia.
Ugu horreyn Perez ayaa sheegay inuu koobkani aad muhiim ugu yahay maadaama oo ay ku jiraan bilawga wakhti cusub oo ay la bilaabayaan tababare Carlo Ancelotti.
“Ku guuleysiga koobkani wax badan ayuu ka dhigan yahay, waxaanu ku jirnaa bilawga waayo cusub oo aanu la bilaabayno tababare si wanaagsan noo garanaya, daafaca isbedel ayaanu ku samaynay natiijooyinkuna waxay ahaayeen kuwo wanaagsan ilaa haatan” ayuu ugu horreynba yidhi Florentino.
“Waanu ku faraxsanahay oo ku niyad sanahay inaanu helno wado cusub oo lagu guuleysto taas oo ah wixii aanu doonaynay.”
Perez ayaa intaas kaddib amaanay saddexleyda kala ah kabtan Marcelo Vieira oo uu halyeey Madrid ah u doortay, Luka Modric iyo goolhaye Thibaut Courtois oo uu iyaga ku sifeeyay kuwa booskooda ugu fiican.
“Marcelo waa cajiib, halyeey Madrid ah oo halkan yimid isaga oo 18 sano jir ah. Waan ku faraxsanahay in jamaahiirtu u istaageen markii uu bedelka kusoo galay maanta, goob (Saudi Arabia) dadku ay waxbadan ka yaqaanaan kubadda cagta oo ay joogaan Madridistas badan.”
Perez ayaa isaga oo Modric iyo Courtois ka hadlayay yidhi “Aniga oo aan doonayn inaan buun-buuniyo, labaduba waa kuwa ugu wanaagsan boosaskooda, Modric wuxuu u qalmaa ku guuleysiga Ballon d’Or markale.”